आत्महत्या उन्मुख प्रचण्ड हुँकार ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, असोज १७, २०७८ मा प्रकाशित
हेर भिरघरे भतिज ! प्रचण्डले त्यसै आत्महत्याको कुरो गरेका होइनन् । चारैतिर दुश्मनले घेरेका छन् । आफ्ना पार्टीका क्षमतावान र जनधार भएका नेता जति प्रमुख दुश्मन ओलीतिरै टाँसिए । एकपछि अर्को गर्दै कार्यकर्ताले पनि छोड्दै गए । हाम्रो माओवादीतिर आम्छन् होला भनेकाहरु पनि एमालेतिर खुर्मुरिए ! हैन, के आकर्षण देखेर एमालेतिर गएका हुन् ? काँग्रेस, माओवादी र अरु पार्टीबाट पनि उतै लागेका छन् । के देखेर गएका हुनन् ।
किन भनेनि विध्वंसे काका ! अब माओवादीमा अकार्षण छैन । जुन पार्टीमा सिद्धान्त, विचार, प्रजातान्त्रिक अभ्यास रहँदैन र कथनी र करनीमा भिन्नता देखिन थाल्छ त्यसमा कार्यकर्ता र जनताको अकर्षण हराउँछ । माओवादी प्रति आकर्षण हराको त्यै कारण हो । अब तिम्रो नेता प्रचण्डको आत्माहत्या सम्बन्धी प्रवचन त पहिला देखि नै सुन्दै आएको हो । र, अति महत्वकांक्षा पुरा नहुँदा मान्छे विचलित, कुण्ठित, षडयन्त्रकारी, उग्र, निरास र विछिप्त बन्छ । यस्तो अवस्थामा अनेक थरी विचार मनमा खेल्छन् । यदि त्यस्ता विचारलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न सकेन भने आत्महत्या नै एक मात्र विकल्प हो । चन्द्रशेखर मात्र होइन विश्वका धेरै नेताले महत्वकांक्षा पुरा नहुँदा…!
तैले के कुरो गरेको भिरघरे ! हाम्रो राष्ट्रनायक महान विचारक प्रचण्ड काम्रेडले ‘मलाई एक्लो बनाए’ भन्न खोजेको मात्र हो । अब पनि हामीसंग कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति बाँकी छ । ओलीको छेउमा हामी केही कमजोर देखिएको मात्र हो ।
त्यही त काका । म काँग्रेस भए पनि पहिला देखि नै भन्दै थिएँ ‘यो देशमा ओली नै एकमात्र नेता हो’ भनेर । कमसेकम ओलीले देश विकास गर्नैका लागि हुटहुटी गर्थे । उनीसँग जबज छ, संगठन छ, कार्यकर्ता, नेता र जनता छन्, माओवादी र हाम्रै काँग्रेसबाट पनि थुप्रै नेता कार्यकर्ता एमालेतिरै प्रवेश गर्दै छन् । यही अवस्थामा तिम्रो प्रचण्ड र हाम्रो देउवा दाइ विलखबन्दमा परेका छन् ।
हाम्रो प्रचण्ड त पहिलादेखि नै एकैछिनमा रुने एकैछिनमा हाँस्ने गर्थे । तर यस्तो निरास थिएनन् । निरास हुनु पनि स्वभाविकै हो । सङ्गठन छैन । एमाले तहसनहस पार्ने भनेको थियो । भरे त पहाडमा कुइँनो ठोके जस्तो आफैं तहसनहसमा हुनुप¥यो ।
नमस्कार है काका ! के तहसनहस भयो भन्दै छौ विध्वंसे काका ! जे कुरो पनि जग दह्रो भएन भने तहसनहस हुन्छ ।
हेर सण्डे भाइ ! अरु भन्दा पनि माओवादी तहसनहस भयो । प्रत्येक जिल्लाबाट लाइन लागेर माओवादी कार्यकर्ता एमालेतिरै प्रवेश गर्दै छन् । माधव नेपालतिर लागेका पनि उतै फर्किन थाले । यही कारणले गर्दा प्रचण्ड निरास भएका छन् । माधवका त चुनापसम्ममा उतै फर्किन्छन् । यता प्रचण्ड पनि अब एक्लो हुने भएँ भनेर आँत्तिए ।
त्यति सारो चै होइन भिरघरे ! हाम्रो प्रचण्डले पहिलाकै जस्तो क्रान्ति गर्ने भनेका छन् । होइन भने आत्माहत्या गरे सरह हुने भयो भनेका छन् ।
अब फेरि क्रान्ति हुन्छ र काका ! पहिला क्रान्ति गर्ने भनेर लागेकाहर्को अवस्था थाहा छ ? घाइते, अपाङ्ग र सहिद परिवारहरु प्रचण्डबाट केही नभएपछि ओलीतिर हेर्दै ‘केही गर्दिनु प¥यो’ भन्दै छन् । उता अरब गएकाहरु माओवादी नेताहर्लाई सराप्तै छन् । त्यसमा पनि पहिला माओवादी सेनामा लागेर दुःख पाएकाहरु प्रचण्डका घोर विरोधी भएर निस्किएका छन् ।
वाययात कुरो नगर सण्डे । ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि खेद्छ’ भने जस्तो भाको मात्र हो । अस्ति विहिवार प्रचण्डले आत्माहात्याको कुरो नगरेको भए हुन्थ्यो । सानो कुरोलाई पनि एमालेका ‘मेडिया’ ले ठूलो बनाएका हुन ।
हौ काका ! अरु (नेता) ले बिर्सिए पनि जनताले बिर्सिदैनन् । खुकुरीले बिर्सिए पनि अचानोको चोट मेटिदैन । अब बल्ल प्रचण्डले बुझे माधवले वैतर्नी तार्दैनन् भन्ने कुरा ! अनि निरासा र विक्षिप्त अवस्थाको समिश्रण व्यक्त गरे ‘आत्माहत्या’ भनेर ।
त्यति मात्र होइन नि भिरघरे दाइ ! प्रचण्डले आफूले मन्त्री बनाएकाहरु ‘पतन भएको’ भने, पार्टीमा आफू लगायत सपैको क्रान्तिकारी छवि नरहेको दावी गरे । केही दिन अघि २०६४ सालको चुनापमा आफूहरुले मत पेटिका साटेको बुथ कब्जा गरेको र प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर चुनाप जितेको भनेर भाषण गरे । अब पनि त्यसै गर्न कार्यकर्तालाई निर्देश दिए ।
ए भिरघरे ! यो सण्डेले भनेको कुरा पनि प्रचण्डले बोलकै हुन । मान्छे तनावमा भएपछि यस्तो हुन्छ । हाम्रा नेता काम्रेड प्रचण्डलाई घरको अबस्थाले विक्षिप्त बनाएको छ। पार्टीको हालत उस्तै छ। जति नेता भेट्न आउँछन् सपै पैसा र पद मात्रै माग्न आउँछन् भनेर प्रचण्डले त्यसै भनेका होइनन् । मलाई त अब हाम्रो पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने मात्र लागेको छ ।
हेर काका ! जे रापेको छ त्यो फल्ने हो । माओवादीले जे रोपेको थियो त्यो फल्दै छ । एमाले र हाम्रो काँग्रेसले रोपेको पनि विरुवा अनुसारको फल फल्दै छ। एमाले र काँग्रेस उर्वर भूमिमा हुर्किए। माओवादी भनेको कडा कटकटिएको रगतमा रोपिएको विरुवा टाक्सियो। ओली समक्ष पेस गरेको १९ पेजको विछोडपत्र (आरोप–पत्र) ले प्रचण्डलाई समाप्त पा¥यो । अबको चुनापपछि माओवादी देखिदैन होला ।
अण्टसण्ट नबोल भिरघरे ! त्यसै त उहाँ गोदावरीको एमाले तामझामले मथिङ्गल खलवलिराको छ । त्यसमाथि तेरो कुराले मेरो कन्सिरी तात्दै छ । बरु भन अब मन्त्रिमण्डल कहिले विस्तार हुन्छ र राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ ।
खै काका ! मन्त्री थप्नका लागि हाम्रो देउवा दाइ तयार भए पनि अरु पार्टीमा नराम्रो विग्रह हुने देखियो । तिम्रो माओवादी, उपेन्द्रको केजाती र माधवको उजातीमा भाँडभैलो हुने निश्चित छ । अब एक–दुई दिनमा विस्तार होला । त्यसपछि तिमार्को पार्टीहर्मा निष्कृय हुने नेताहर्को संख्या ह्वात्तै बढ्छ । एकातिर सङ्गठन छैन अर्कातिर मन्त्री हुन नपाएका हर्को लर्को थाम्न गाह्रो छ । अब राजनीति, ओली र देउवाको वरिपरि घुम्ने हो । मध्यावधी चुनाप पनि हुन सक्छ ।
कसरी मध्यावधी हुन्छ । हाम्रो प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र कसैले मान्दैन । मध्यावधी कल्ले मान्छ र !
देउवा र ओलीले मान्छन् र मध्यावधी ठोक्छन् । तिमार्ले मान कि नमान के मतलव ! लौ म लाग्छु घरतिर । तिमी आँशु झारेर बस् ।